Ndinike ixesha lokuphola yasekwa ngo-2017 ngenjongo yokuzisa uhlalutyo kunye neendaba zamva ze umhlaba webhanyabhanya kubasebenzisi bethu be-Intanethi. Apha unokufumana inani elikhulu lamanqaku kwiifilimu zazo zonke izifundo, kunye nakwilizwe lomculo. Ukusuka imbali yomculo, imibulelo yomculo, uhamba ngeendaba zamva nje ezivela kumaqela afanelekileyo exesha lethu nakwangaphambili.
Onke la manqaku aveliswe liqela lethu elimangalisayo lababhali, onokuthi ulibone ngezantsi. Ukuba ufuna ukuzibandakanya nabo ungaqhagamshelana nathi nge ifom elandelayo. Ukuba, kwelinye icala, ufuna ukubona lonke uluhlu lwezihloko ezigutyungelwe kwisiza kwaye zihlelwe ngokwamacandelo, ungandwendwela kweli phepha.
Ndiyazithanda iimuvi nomculo. Ndihlala ndiqwalasele ukukhutshwa okutsha, nokuba kukwi-Intanethi, kwiimagazini, ... nantoni na! Esinye sezona zicwangciso zam zilungileyo kukuchitha imva kwemini eyonqenayo nomntu omthandayo ... Yeyona ilungileyo. Kwaye ndiyakonwabela ukubhala kunye nokwabelana ngayo yonke into endinokuyenza malunga nokuqhubeka kwilizwe lezolonwabo.